Nnwom 122 NA-TWI - Yerusalem nkamfo - Wɔka kyerɛɛ me - Bible Gateway
Nnwom 121Nnwom 123
Nnwom 122 Nkwa Asem (NA-TWI)
122 Wɔka kyerɛɛ me se, “Ma yɛnkɔ Awurade fi” no, m’ani gyei. 2 Afei yegyina Yerusalem apon mu wɔ ha. 3 Yerusalem yɛ kurow a ɛyɛ fɛ na asomdwoe wɔ mu. 4 Ɛha na mmusuakuw no fi, Israel mmusuakuw no a, wɔrebɛda Awurade ase sɛnea n’ahyɛde no te no. 5 Israelhene tena ase bu ne nkurɔfo atɛn.